Mobile Device Management ဆိုတာ နေ့စဉ်အသုံးပြူလေ့ရှိတဲ့ Mobile ပစ္စည်းတွေကို ထိန်းချုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Devices တွင် Phone, Tablet, Laptop, Desktop တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ Mobile Devices တွေ များစွာ တီထွင်လာနိုင်မှု၊ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေကို တီထွင်လာနိုင်မှုတို့ကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်းက Mobile Device တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလျက်ရှိကြပါတယ်။ ယခုအခါ Organization အကြီးတွေမှာ ဆိုရင် ဝန်းထမ်းတွေ ရဲ့ Mobile Device တွေ ကို ထိန်းချုပ်လာကြတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ့် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Data တွေ၊ Information တွေ အပြင်ကို ရောက်မသွားနိုင်အောင်၊ Mobile Devices ထဲမှာရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော Applications တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်နှင့် ပိုမို ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်ကို ရအောင် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။ Mobile Device Management ကို တည်ဆောက်ရာမှာ Policy (မူဝါဒ) တွေကို ချမှတ်ထားတယ်။ ဒီ Policy တွေ အပေါ်ကို အခြေခံပြီးတော့ပဲ ထိန်းချုပ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Policy တွေ အကြောင်းကိုတော့ အနောက်မှာ ဆက်ပြောပြသွားပါမယ်။ ပထမဆုံး Policy တွေ အကြောင်းမရှင်းပြခင်မှာ Organization ကြီးတွေ မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ ပြသနာတွေကို အနည်းငယ် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတော်တော် များများရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေမှာ Mobile Devices တွေဖြစ်တဲ့ (Laptop သို့မဟုတ် Tablet သို့မဟုတ် Smartphone) သုံးလေ့ရှိကြတယ်။
1. Device တစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စာတစ်ကြောင်း၊ Information တစ်ခုခုကို Copy ကူးယူပြီး တခြား အပြင်ကလူကို Paste လုပ်ပြီး ပို့လိုက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ပြဿနာမျိုးအတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ Device ရဲ့ Copy Paste ကို ပိတ်တဲ့ MDM ရဲ့ Policy ကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
2. ကိုယ့် Organization ထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေ အရေးကြီးတဲ့ Privacy များလွန်းလှတဲ့ ပုံစံ (ဥပမာ – Data Center ကြီးထဲတွင်) ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခြင်းတွေ ကို ကန့်ကွက်ထားလေ့ရှိတယ်။ သို့သော် မသမာသော ရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် အမှတ်မထင် ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်မိခြင်းကြောင့် ကိုယ့် အဖွဲ့အစည်း Data တွေ အပြင်ကို ပေါက်ကြားသွားနိုင်ပါတယ်။ MDM Solution တွင် Camera ကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်။ ကိုယ့် Organization ကို GPS Location ထဲ Device ရောက်လာတာနဲ့ အလိုအလျောက် Camera ပိတ်သွားအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
3. အလုပ်အချိန်မှာ Game မဆော့စေချင်လို့ Game Software တွေကို အလုပ်ချိန်မှာ အလိုအလျောက် ပိတ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ Youtube တို့ Facebook တို့လဲ ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။
4. အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Application တွေသုံးတဲ့ အခါမှာလဲ Password(လျို့ဝှက်နံပါတ်) တွေထားလေ့ရှိတယ်။ ဒါကို တစ်ချို့ ဝန်းထမ်းတွေ အပျင်းကြီးလို့ဖြစ်စေ လုပ်ရကောင်းမှန်း မသိလို့ ုဖစ်စေ၊ Password မထားပဲရှိတက်ကြတယ်။ ဒါဆိုရင် MDM ရဲ့ Policy ကို အသုံးချကာ Password ဘယ်နှလုံး အနည်းဆုံးထားရမယ်။ မထားမဖြစ် ထားရမယ်။ ဘယ်နှရက် တစ်ခါ Password အသစ်ပြောင်းပေးရမယ်။ အစရှိသဖြင့် Policy တွေ တည်ဆောက်ထားလိူ့ ရပါတယ်။
5. Screenshot မရအောင်ပိတ်ထားလို့လဲရပါတယ်။
6. နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ကုမ္မဏီရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Data တွေ ပါတဲ့ ဖုန်း (သို့မဟုတ်) Laptop ပျေက်သွားပြီ ဆိုပါတော့။ တစ်ခြားလူလက်ထဲ ရောက်သွားလဲ ဘာ Information မှ မရမိသွားအောင် MDM Solution နဲ့ Remote(အဝေးကနေ) လှမ်းပြီး ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်များစွာသော ဥပမာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
ဆက်လက်ပြီး Policy တွေ အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ Policy တွေကို အခြေခံပြီး ကိုယ့် Organization အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကို စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
1. Password တစ်ခု မထားမဖြစ် ထားရှိစေခြင်း
2. ရိုးရှင်းသော Password ထားလို့ မရခြင်း
3. Password အရှည် သတ်မှတ်ထားခြင်း
4. Password ကို ဘယ်နှခါမှားဝင်ရင် Device ထဲသို့ ဝင်မရတော့ခြင်း
5. Password အသစ်ကို ဘယ်နှရက် တစ်ကြိမ်လဲစေခြင်း
6. Password ထားရာတွင် နဂို အရင် Password ကို ပြန်မသုံးစေခြင်း
1. Backup Data တွေထားရှိခြင်း
2. ကိုယ့် Organization ရဲ့ အခြားအပြင်က နေရာ တစ်ခုခု သို့ Data တွေ Synchronization လုပ်နေခြင်းကို ပိတ်ထားခြင်း
1. Screen Capture တွေကို ပိတ်ထားစေခြင်း
2. ကိုယ့် Device ရဲ့ ချိ့ယွင်းချက်ကို လှမ်းရှာနိုင်တဲ့ Data တွေ ပို့ခြင်းကို ရပ်တန့် နိုင်ခြင်း
1. Videoconference (Video Call ခေါ်ခြင်း) ကို ပိတ်ထားနိုင်းခြင်း
2. Applications Store သွားခြင်းကို ပိတ်ထားခြင်း
3. တစ်ချို့ Application တွေကို သုံးမရအောင်ပိတ်ထားခြင်း
1. Camera ပိတ်ခြင်း
2. Region(နေရာ) သတ်မှတ်ခြင်း
Mobile Device Management ကို တည်ဆောက်နိုင်ရန် Provide ပေးတဲ့ Vendors များစွာရှိတယ်။ NEX4 အနေနဲ့တော့ Microsoft Intune နဲ့ Vmware Airwatch တို့ ကို Support လုပ်ပေးပါတယ်။
ကမ႓ာနဲ့ အဝှမ်း MDM Solution ကို Organization တော်တော် များများမှာ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ NEX4 အနေနဲ့လဲ Customer တွေ ပိုပြီး Valuable ဖြစ်လာအောင်၊ Good Information Protection ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အသင့်ရှိနေပါတယ်။